MARKA 14.12-26	F. 1 | Fitandremana Ankadifotsy
MARKA 14.12-26	F. 1
FANATITRY NY FANEKENA VAOVAO
Mahalala ny olona sy ny zavatra rehetra ny Tompo. Satria mbola tao ambanin’ny lalàna, dia nanomana ny Paska tahaka ny rehetra ny Tompo sy ny mpianany. Tsy mba nanana trano fonenany manokana ny Tompo, ka naniraka ny mpianany ho any amin’ny tranon’olona iray Izy izay fantany fa efa voaomana ka tsy handà handray Azy. Amin’ny antsipiriany no nilazan’i Jesoa ny fomba hahitan’ny mpianatra ilay toerana. Tanteraka tsy nisy nipika izany. Fantany izay efa niomana ka manana toe-po sy toe-panahy vonona handray azy.
Raha misy ilan’ny Tompo anao, na izay mety anananao, vonona hanaiky honolotra izany ve ianao, amin’ny fotoana rehetra sy ny toerana rehetra?
Mampitandrina ny Tompo, alohan’ny hamaliany ny ratsy. Na dia efa fantatry ny Tompo aza fa Jodasy no hamadika azy, dia tsy mba nambarany mivantana tamin’ny mpianatra rehetra izany. Mbola fitiavana an’i Jodasy hibebaka no nampitandremany azy, raha mety hihaino sy hanapa-kevitra hiova izy. Tsy mba manebaka na manala-baraka olona ny Tompo fa mitaona ny olona rehetra hibebaka kosa. Manana ny hafatra omeny ny tsirairay avy Izy.
Manaiky ho fanatitra noho ny otan’ny rehetra Jesoa. Hametraka fanekena vaovao ho an’ny olona rehetra i Jesoa momba ny fifandraisana amin’Andriamanitra: hanolotra ny tenany Izy ho faty eo amin’ny hazo fijaliana, handatsaka ny rany ho famelan-keloka. Izany dia ho fanatitra tokana ankasitrahan’Andriamanitra, ka tsy hisy intsony aorian’izany. Izany no hany làlana hahatanteraka ny fihavanan’ny olona indray amin’Andriamanitra nahary azy taorian’ny niodinany taminy noho ny otany.
Vavaka : Misaotra Jesoa ô! Fa nanaiky hisolo heloka ahy Ianao. Amena !